Fanoratan-tsoratry ny trondro thermoplastika tsara indrindra misy loko hafa amin'ny fenitra ambany miaraka amidy ambany Mpanamboatra sy Factory | Gaoyuan
Antsoy izahay: 86-15962488132
Antsoy izahay: 86-18752169586
Loko manamarika arabe
Doko fanamarihana lalana thermoplastic mahazatra
Convex loko marika marika thermoplastic
Lokoy ny akora
Primer amin'ny fanamarihana ny arabe
Vakana fitaratra ho an'ny fanamarihana ny arabe
Masinina fanamarihana arabe
Masinina manosika tanana
Masinina voatosika tena
Masinina manadio sy mitsoka
Masinina fanesorana ny tsipika taloha
Momba ny gaoyuan
Fanoratan-tsoratry ny arofenitra Thermoplastic Reflective amin'ny fari-pitsipika samihafa miaraka amidy ambany
Varotra ambongadiny lalotra ambongadiny ho an'ny Thermoplas ...
1200kgFampandrenesana thermoplastika tanky roa ...
Double tank thermoplastic Preheater CYF100 ...
Double Tank Thermoplastic YF600
Preheater thermoplastic an'ny tank tokana
Famonoana scribing mafana manangom-baravarana dia mitazona primer vakana fitaratra sy solika solitany. Afanaina ao anaty masinina miempo mafana ny fonosana, fehezo ny hafanana miempo eo anelanelan'ny 18 ° C sy 220 ° C, ary afangaro mandritra ny 10 minitra alohan'ny hamonoana. Mariho ary refeso ny toerana arakaraky ny toerana sy ny tarehimarika voalaza ao amin'ny sary famolavolana, ary avy eo apetaho amin'ny primera ny marika. Ny famonoana mafana dia azo apetraka raha tsy aorian'ny maina ny primer. Ny vakana fitaratra fitaratra dia miparitaka eo am-panamarihana mba hampitomboana ny famantarana ny alina.
Karazana Doko fanamarihana lalana thermoplastic mahazatra
Akora Resin-tsolika C5, CaCO3, vakana fitaratra, DOP, PE, sns.
Loko Fotsy / mavo / fanao
Bika Aman 'endrika vovoka
Temperature fanafanana 180ºC-220ºC
Teboka malemilemy 90ºC-120ºC
Fotoana maina 3 minitra (amin'ny 23ºC)
Lanja 25 kg / kitapo
Fiainana talantalana 365 andro
Ny raikipohy tsy manam-paharoa dia manana firaiketam-po tsara amin'ny velaran'ny lalana. Ny mpitsikilo manokana dia apetaka alohan'ny hanamarihana mba hampiorina kokoa ny fifangaroana eo amin'ny arofanina sy ny lalana.
02. Fanoherana fanoherana
Izy io dia misy additives anti-skid, hany ka mitazona ny fahombiazan'ny leveling tsara ny coating, manana fahombiazan'ny anti-skid tsara, ary miantoka ny filaminan'ny fiara.
Misy vakana fitaratra tsara kalitao ampy miaraka amin'ny index bias tsy miovaova, ary safidio ara-tsiansa vakana mifangaro miaraka amin'ny tahan'ny sombin-javatra samy hafa arakaraka ny tahan'ny vakana fitaratra, mba hahazoana antoka fa misy vokany tsara amin'ny marika vaovao sy taloha.
Ny famolavolana samihafa dia omena arakaraka ny fepetra fananganana samihafa mba hahazoana antoka 3-5 minitra ny fivezivezena maina ary hitazonana ny fahombiazan'ny antifouling.
Izy io dia misy additives manohitra ny ultraviolet ary voaomana amin'ny akora misy hazavana tsara sy fitoniana mafana, mba haharetan'ny marika hatrany ny fanjakana sy ny loko am-boalohany.
Firaikitra mahery: mitombina ny atiny resin. Ny elastomer vita amin'ny rubber manokana dia asiana ny menaka any ambany, izay misy miraikitra mafy. Hamarino fa ara-dalàna ny fizotran'ny fananganana ary tsy hianjera.
Fanoherana tsara ny triatra: mora manorotoro ny mari-pana mafana noho ny tsy fitovian'ny maripana. Ampio resina EVA ampy ho an'ny fisorohana mba hisorohana ny vaky.
Loko marevaka: nalaina loko ny pigment, miaraka amina antonony tsara, mahatohitra tsara ny toetr'andro ary tsy misy fiovan'ny toetr'andro aorian'ny fipoahana maharitra.
Ny tahan'ny firakotra avo lenta: ny hakitroky kely, ny habetsahan'ny habe ary ny tahan'ny firakotra avo lenta no tena mampiavaka antsika.
Fanoherana mahery vaika mahery: ny kalitao sy ny fatran'ny savoka PE no hevi-dehibe misy ny fanoherana ny tasy. Ny savoka Exxon PE no vokatra tian'ny orinasa efa an-taonany maro.
Lalana marika thermoplastic ara-dalàna manamarina loko
làlambe, ozinina, toeram-pijanonana, kianja filalaovana, taranja golf ary ampahefatry ny fiainana sns
Teo aloha: Mpanamboatra milina fanamarihana làlana mora vidy - Preheater thermoplastic tank tokana - Gaoyuan
Manaraka: Fanamarihana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha
Taratasy fanamarihana lalana thermoplastic
Ny saram-panazavana manara-penitra amin'ny lalana thermoplastic
Vidin'ny loko manamarika lalana Thermoplastic
Lalam-by mangatsiaka manamarika loko mainty loko berg ...
Fanamarihana haingam-pandeha haingam-pandeha Thermoplastic ...
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na ny lisitry ny vidiny, azafady avelao ny mailakao aminay ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.nanontany
Orinasa: Jiangsu Gaoyuan International Trade Co., Ltd.
Adiresy: No. 31, Jiefang West Road, Yunhe Street, Pizhou City
Momba an'i Gaoyuan